Izindaba - Isikhathi nokushintsha kwesikhala kumangalisa ngokwengeziwe! Kukhishwe umbiko wombukiso ka-2021 Hotelex Shanghai Post! Ababonisi nezethameli bazi kangcono!
Isikhathi nokushintsha kwesikhala kumangalisa kakhulu! Kukhishwe umbiko wombukiso ka-2021 Hotelex Shanghai Post! Ababonisi nezethameli bazi kangcono!
Kusukela ngoMashi 29 kuya ku-Ephreli 1, 2021, i-30th Shanghai International Hotel kanye ne-Expo Expo yabanjwa ngempumelelo eShanghai Puxi Hongqiao National Convention and Exhibition Center.
Ngasikhathi sinye, lo mbukiso futhi ungomunye wemisebenzi yamakhadi ebhizinisi amathathu axhaswe yiShanghai Municipal Bureau of Culture and Tourism ngesikhathi "sohlelo lweminyaka eyisi-14" - okuyingxenye ebalulekile yoMbukiso Wezokuvakasha wokuqala waseShanghai, odale ingqophamlando entsha emlandweni we-Catering Exhibition enesilinganiso samamitha-skwele angama-400000
Iminyaka engu-30 yomhleli yokuqongelela okujulile emkhakheni wehhotela nezokupheka kanye nokubambisana nokwesekwa nabalingani kubonakala ngokuphelele kulo mbukiso. Njengombukiso wokuqala wehhotela neCatering embonini entwasahlobo ka-2021, lo mbukiso ubeke umlando omusha ngokwezigaba zemibukiso kanye nokwahlukaniswa kwezindawo zombukiso, ubuningi / ikhwalithi / ukuhlolwa kwabakhombisi nezivakashi, imicimbi, izinkundla nezingqungquthela, nomphumela wokubonisa uqobo, okukhombisa uhlangothi olwanelisayo, okungangabazeki ukuthi okukhuthaze ukuzethemba kwemboni yonke nezimakethe.
IHotelex Shanghai ihlanganise imibiko engaphezu kwama-300 evela kwabezindaba abajwayelekile (amaphephandaba, amavidiyo, njll.) Kanye nemibiko engaphezu kwengu-7000 evela kwabezindaba abasha (amawebhusayithi, amaklayenti, izinkundla, okuthunyelwe kwebhulogi, ama-microblogs, wechat, njll.)! Kusuka kumbhalo, izithombe, amavidiyo ukusakazwa bukhoma, ukusakazwa okuzungezile nokuhlukahlukene futhi kudlale indima ebonakalayo ekukhuthazeni ukuvezwa komkhiqizo nomkhiqizo kwabakhangisi, kanye nokukhuthaza ukuthandwa.
Lo mbukiso uthole izivakashi eziqeqeshiwe ezingama-211962 kanye nezingxoxo ngezebhizinisi, ukwanda ngama-33% ngaphezu kuka-2019. Phakathi kwabo, kunezivakashi ezingama-2717 zaphesheya kwezilwandle ezivela emazweni nezifunda eziyi-103.
Inani lababonisi belingu-2875, ukwanda okuphawulekayo kwe-12% ngaphezu kwe-2019, ukuphakama okusha. Imibukiso esizeni sombukiso ivela emazweni kanye nezifunda eziyi-116 emhlabeni wonke. Imboni yehhotela neyokupheka ekhaya naphesheya ihlanganisa zonke izinto.I-Zhejiang Tiantai Jierong New Material Co, Ltd. nayo ibambe iqhaza embukisweni nethimba. Balethe imikhiqizo yabo emisha, kufaka phakathi isikhwama setiyi se-PLA corn fiber, i-PETC / PETD / inayiloni / unxantathu ongalukiwe isikhwama esingenalutho, Kuhehe amakhasimende amaningi amasha namadala ukuwavakashela.